ရှုခင်းသစ် NEW SIGHTS – Page2– စာပေ၊အနုပညာ၊ယဉ်ကျေးမှု၊လူမှုရှုခင်း၊အနာဂတ်
ရှုခင်းသစ် မှ ကြိုဆိုပါတယ်
စာပေ၊ အနုပညာ ၊ ယဉ်ကျေးမှု ၊ လူမှုဘဝ ၊ အနာဂါတ်ရှုခင်း
မျှော်တွေး ကြည့်ရှုခြင်း အနုပညာ
ကဗျာ ဟူသည် လူ့ဘာသာစကား
စာပေ ဟူသည် လူ့ယဉ်ကျေးမှု ၏ အတိုင်းအတာ
Posted June 20, 2016 EditorPosted in ကဗျာ
စစ်ပွဲ (နီလာမိုးဆွေ) ငယ်ငယ်တုန်းက စစ်တိုက်တမ်း ကစားခဲ့သလို ဘယ်ရန်သူက “ပစ်နိုင်ပြီ” လို့ အချက်ပေးခဲ့ပါသလဲ နှလုံးရည်၊လက်ရုံးရည်ချင်း ယှဉ်တဲ့အခါ နေရာတိုင်းက စစ်တလင်းပဲ လက်ညှိုးရဲ့စေလားရာတိုင်း ရင်ကိုခံတုတ်လုပ်ရတာကလည်း နိယာမတခု ကျည်ကမျက်စေ့ မပါဘူး မြောက်အရပ်ကိုညွှန်မပြဘူး ဗျူဟာစစ်တမ်းအရ ငါဟာ ဘယ်တော့မှသတ်ကွင်းကို လည်စင်းမပေးခဲ့ဘူး တကောင်ကျွေးသုံးကောင်စား ကင်းယူတဲ့အကွက်တွေကှိုဗဟာဒူး လိုလှလှပပလေး ခြေစွမ်းပြနိုင်ခဲ့တယ် ‘ချက်စ်’ ဆိုတာနဲ့ ပွဲသိမ်းခရာမှုတ်ပေတော့…။ ။ နီလာမိုးဆွေ
မုတ်သုန်စစ်တမ်း(သို့မဟုတ်) ၆၄-နှစ်မြောက် ဘ၀စာမျက်နှာ
Posted June 19, 2016 June 22, 2016 EditorPosted in သမိုင်းရေစီး, ဆောင်းပါး
မုတ်သုန်စစ်တမ်း(သို့မဟုတ်) ၆၄-နှစ်မြောက် ဘ၀စာမျက်နှာ “၂၀၀၉ခုနှစ်၊ ဇွန်လ (၁၉) ရက်နေ့တွင် ကျရောက်သည့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ (၆၄) နှစ်မြောက် မွေးနေ့နှင့် (၁၃) ကြိမ်မြောက် `မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသမီးများနေ့`အား ဂုဏ်ပြုပါသည်“ (၁) (၆၄)နှစ်ပြည့်ပြီ။ (၆၄)နှစ်မြောက် မွေးနေ့ရှင်က အင်းစိန်ထောင်အတွင်း၌ မတရားအမှုအား ရင်ဆိုင်နေရဆဲ….။ အကျဉ်းထောင်၏ဗူးအ၀၌မူ မောင်းပြန်သေနတ်များနှင့်စစ်သားများက စောင့်ကြပ်၍နေ၏။ ရေကူး၍လာသောပြဿနာက သူမနေထိုင်သည့် ခြံဝင်းအတွင်းသို့ရောက်လာ၏။ သူမနေထိုင်ရာ အမှတ်(၅၄)တက္ကသိုလ်ရိပ်သာလမ်းနေအိမ်က မနှစ်ကတိုက်ခတ်ခဲ့သည့် နာဂစ်ဆိုင်ကလုန်းကြောင့် ခြံဝင်းအတွင်း သစ်ပင်အချို့ ကျိုးပဲ့ခဲ့ရ၏။ ရှင်းလင်းပြီးဖြစ်သော်လည်း ဒဏ်ရာဒဏ်ချက်တို့က ရှိနေ၏။ မူလအတိုင်း ပြန်မဖြစ်တော့….။ မုန်သုန်ဦးသည် မလှပ။ ရက်စက်မှုနှင့်နိဒါန်းပျိုး၏။ မလှပသည့် မုန်သုန်ဦးတွင်ပင် …..စစ်အုပ်စုသည် သူတို့၏ အနာဂတ်အား ထုဆစ်ခဲ့၏။ (၂) `စာရေးခြင်း၊ […]
သူငယ်ချင်း တစ်ယောက်နဲ့ ဖုန်းပြောခြင်း (ကိုသားကြီး)
Posted May 29, 2016 May 29, 2016 EditorPosted in ကဗျာ
သူငယ်ချင်း တစ်ယောက်နဲ့ ဖုန်းပြောခြင်း (ကိုသားကြီး) သတ္တိ နဲ့ သိမ်မွေ့တတ်ဖို့ ဆိုတာ ပညာနဲ့ရှင်သန် ထမြောက်လာတဲ့ ဆင်းရဲခြင်း ဘဲ ။ ခင်ဗျားတို့ အမှန်တရား နဲ့ မျက်လုံးချင်း ဆုံအောင် ကြည့် ရဲလား ။ အမှန်က အမှန်စင်စစ် ဖြစ်ခဲ့ရင် တရားကို လက်တွဲ မဖြုတ် တတ်ကြောင်း သိရဲ့။ တေးဆို နွေငှက်ငယ်ရဲ့ အပူကို သာမိုမီတာ မသုံးဘဲ သိနေခြင်းဟာ အလှတရားပေါ် တည့်တည့်ကျတဲ့ စာနာစိတ် ဘဲ ။ ဖောဖောသီသီ ပေးလိုက်ရမယ့် အရာတွေမှာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ နှစ်နှစ် ခြိုက်ခြိုက် အပြုံး များ ပါတယ်။ အဝေး တောင်တန်းများရဲ့ အရေပြားကျန်းမာရေး ကို ရေဒီယို အဟောင်းတစ်လုံး […]
ဝင်းယော်မှာ မိုးတွေ သည်းနေပြီ…ကိုငြိမ်း ( ရွှေအိမ်စည်)
Posted May 29, 2016 EditorPosted in ရသရှုခင်း, သမိုင်းရေစီး
၀င်းယော်မှာ မိုးတွေသည်းနေပြီ…. ကိုငြိမ်း (ရွှေအိမ်စည်) (က) တန်ခူးနွေကပူ၏။ အပူလှိုင်းကြောင့် … တန်ခူးနွေသည် ပို၍ပူပြင်းလွန်းနေသည်။ နေပူပြင်းပြင်းအောက်တွင်ပင်၊ သူ … ကျနော်အိမ်သို့ရောက်လာ၏။ ကျနော်က အိမ်တွင်မရှိ…။ သူစတင်တည်ထောင်ထားခဲ့သည့် စာကြည့်တိုက်လေးတွင်ရောက်နေသည်။ အိမ်နှင့်စာကြည့်တိုက်က မဝေး….။ သူ… စာကြည့်တိုက်သို့ လိုက်လာ၏။ “အိမ်ရောက်သွားသေးတယ်….ခင်ဗျားစာကြည့်တိုက်မှာဆိုလုိ့လိုက်လာတာ….” ကျနော့်အနားတွင်ဝင်ထိုင်ရင်း စကားဆို၏။ ပြီးလျှင်…. သူ၏နှုတ်ခမ်းထူထူမဲမဲကြီးအား စူ၍ လေပူတစ်ချက်အား မှုတ်ထုတ်ရင်း… “ပူလိုက်တာ…” ဟု့ မဟတဟ ညည်း၏။ အပူဒဏ်ကြောင့် သူ့မျက်နှာက ချွေးတို့နှင့်သီးနေ၏။ ကြိုးကျဲကျဲ…မုတ်ဆိတ်မွှေးထိုးထိုးထောင်ထောင်များတွင် ချွေးဥတို့က တွဲလွဲခို၍နေသည်။ သူထံမှ ချဉ်စူးစူးအနံ့အားရ၏။ ခဲပြာရောင်ညို့မှိုင်းမှိုင်းရှပ်အင်္ကျီလက်တိုနှင့်ဂျင်းဘောင်းဘီနက်ပြာရောင်၏အောက်တွင်သူ၏ကိုယ်ခန္ဒာသည်သေးသွယ်ပိန်လှီလွန်း၍နေသည်။ခဲပြာရောင်ညို့မှိုင်းမှိုင်းရှပ်အင်္ကျီကဆေးလိပ်မီးပေါက်ရာများနှင့် ….။ ‘ခင်ဗျားကို ကဗျာလာပေးတာ…’ ဟု့ ပြောရင်း…. သူလွယ်ထားသည့် ကရင်လွယ်အိတ်အတွင်းသို့ လက်နှိုက်၍ရှာနေသည်။ ကျနော်က… ‘ဟေ့လူ ခေါင်းစဉ်ရောပါရဲ့လား’ဟု့ […]
အစွဲ (လင်းသက်ငြိမ်) ငါ့အနားလာပါ ငါ့အနားလာစမ်းပါ မြို့တစ်မြို့စီမှာဆိုပေမယ့် နယ်မြေတစ်ခုစီမှာဆိုပေမယ့် ငါ့အနားလာပါ ငါ့အနားလာစမ်းပါ ခြေထောက်တွေကိုဂရုစိုက်ပါ လက်ချောင်းတွေကိုဂရုစိုက်ပါ နားတွေနဲ့စဉ်းစားပြီး မျက်လုံးတွေနဲ့သွားပါ အရာရာကိုနှလုံးသားနဲ့ဆုံးဖြတ်ရင်မှားလိမ့်မယ် အရာရာကိုဦးနှောက်နဲ့ခံစားရင်မှားလိမ့်မယ် ငါ့အနားလာပါ ငါ့အနားလာစမ်းပါ လူတွေအရမ်းရှုပ်နေတဲ့နေရာတွေရောက်တိုင်း လူခြေတိတ်ဆိတ်တဲ့လမ်းတွေရောက်တိုင်း ငါ့အနားလာပါ ငါ့အနားလာစမ်းပါ မင်းရောက်နေတဲ့နေရာတိုင်းဟာ ငါ့ရင်ခုန်သံသက်ရောက်ရာရပ်ဝန်းပဲ မင့်ခရီးတိုင်းမှာငါ့ချစ်မေတ္တာတွေက အရိပ်လိုဖြစ်ထွန်းနေကြလေရဲ့ ပျော်ရွှင်မှုကိုစားသုံးပါ မိုက်မဲမှုကိုသတိထားကိုင်တွယ်ပါ ငြီးငွေ့မှုကိုတော့ ရေမလောင်းမိပါစေနဲ့ နောက်ကျောမလုံရင်ဖျတ်ခနဲလှည့်ကြည့်လိုက် ရိပ်ခနဲဖြတ်ပြေးသွားတာတွေ့ရင် အဲ့ဒါငါပါပဲ။ လင်းသက်ငြိမ် 18.12.2015
Posted May 29, 2016 EditorPosted in သမိုင်းရေစီး, ဆောင်းပါး
မူခါးဝီးကျိုး (ရွှေအိမ်စည်) “ကြယ်တွေစုံတဲ့ည…ထပ်ကြုံရအုံးမယ်…. ကြယ်တွေတကယ်ဆုံတဲ့ည… လှနေမှာပေါ့ကွယ်” (ထူးအိမ်သင်၏ ကြယ်တွေဆုံတဲ့ည) (က) ‘ထီးမူခီး’ စခန်းကျဆုံးခန်းက ၊ လျှပ်ပြတ်သကဲ့သို့ မြန်ဆန်လွန်းလှ၏။ ကျဆုံးမှုသည်အပြိုပြို အလဲလဲနှင့် ဖရိုဖရဲနိုင်လွန်းလှ၏။ မုန်တိုင်းမွှေ့၍တစစီ လွှင့်စင်ပြိုပျက်သွားသကဲ့သို့…။ လက်နက်ကိုင်စစ်သည်အင်အား တစ်ရာကျော်ရှိသည့် ခံစစ်သေစခန်း၊ ဆုတ်ခွာခွင့်လုံးဝမရှိသည့် စခန်းကြီးသည် ဆယ့်ငါးမိနစ်အတွင်းမှာပင်ကျဆုံးခဲ့ရသည်။ ခြံစည်းရိုး ၃-ထပ်ကာထား၏။ ညှောင့်နှင့်မိုင်းများအား ခင်းထား၏။ ဆက်သွယ်ရေးလျှောက်မြောင်းများအား ပတ်လည်ခံစစ်သေနင်္ဂဗျူဟာအရ တူးထား၏။ အိုဗာဟတ်ဘန်ကာများရှိ၏။ ဤသို့သော…. ခိုင်ခံ့သည့်ခံစစ်သေစခန်းကြီးသည် ခဏငယ်အတွင်း၌ အပြိုပြိုအကွဲကွဲနှင့်ကျဆုံးခဲ့ရ၏။ ‘မူသယ်-ဗျက်ကော’စခန်းက ထီးမူခီးစခန်းနှင့် အနီးဆုံးစခန်းတခုဖြစ်သည်။ ‘မူသယ်-ဗျက်ကော’ တွင် တပ်ရင်းမှူးနှင့်စစ်ကြောင်း(၁)ရှိ၏။ ထီးမူခီးက …‘မူသယ်-ဗျက်ကော’ရှိ စစ်ကြောင်း (၁)သို့ စစ်ကူတောင်းရန် ဆက်သွယ်ရေးစက်ကိုပင် မဖွင့်နိုင်ရှာခဲ့…။ လျှပ်တပြတ်အတွင်း ကျဆုံးခဲ့ရ၏။ ၁၉၉၂ ခုနှစ် […]
Posted May 21, 2016 EditorPosted in ကဗျာ
မီးပုံး (ဒီလူည) မှောင် မှ သိပ်လှတဲ့မျိုးရိုးပဲ။ ချိတ်ဆွဲထားတဲ့ ကိုင်းမှာ ပန်းတွေပွင့်သလို အချိန်အခါတည့်မှ မွှေးတဲ့ရနံ့။ အံ့ဩစရာတော့အ ကောင်းသား။ မှိုင်းဝ အောင် တိုက်မှ အမြင့်ကို ပျံတတ် မျက် မမြင် တစ်ယောက်လို ဆင် ကန်းတောတိုး။ ရင် ဘတ်ထဲ မီးတွေ ငုံပြီး ကြယ်တွေဆီ လေဟုန်စီးနေ တော့ ကမ်းမ ရောက်တဲ့ လှေလို၊ ရ သေ့လို ဈာန်လျှော ခဲ့။ ။ ဒီလူည
သူပုန်တစ်ယောက်၏ဖွင့်ဟ၀န်ခံချက် ၊ပထမညအစီရင်ခံစာ (အကျဉ်း) – ရွှေအိမ်စည်
Posted May 20, 2016 May 19, 2016 EditorPosted in ရသရှုခင်း, သမိုင်းရေစီး, ဆောင်းပါး
သူပုန်တစ်ယောက်၏ဖွင့်ဟ၀န်ခံချက် ၊ပထမညအစီရင်ခံစာ (အကျဉ်း) – ရွှေအိမ်စည် အပိုင်း (၁) (က) လူတွေနဲ့ဝေး —- ဝေး၊ ဝေးတဲ့နယ်မြေ တစ်နေရာရှိ—-ရှိ၊ ရှိရာမယ်လေ နက်ရှိုင်းတဲ့တောရဲ့ ရင်ခွင်မှာပျော်နေ သဘာဝရဲ့ ရင်သွေးငယ်တွေ —- (စိုင်းထီးဆိုင်၏ “ သဘာဝရဲ့ရင်သွေငယ်“ သီချင်းမှ) “ အဟုန်းဝ“ ရွာက ဘီးလင်းချောင်းအား ကားယားခွ၍ ထားသည်။ ချောင်း၏အရှေ့ ဘက်ကမ်း၌လည်း အဟုန်းဝရွာရှိသလို ချောင်း၏အနောက်ဘက်ကမ်း တွင်လည်း အဟုန်းဝရွာရှိသည်။ နှစ်ရွာလုံးက ဘီးလင်းချောင်းအား မေးတင်၍ ထားကြသည်။ မျက်နှာချင်းဆိုင်မဟုတ် ဓါးလွယ်ခုတ်သဏ္ဍာန်းရှိသည်။ အနောက်ဖက်ကမ်းရွာက မြစ်ညှာ ဖက်ပိုကျပြီး အရှေ့ဖက်ကမ်းရွာကမူ မြစ်အောက်ဖက်ပိုကျသည်။ အဟုန်းဝအနောက်ဖက် ကမ်းရွာက င်္ဘီးလင်းမြို့နှင့် ကမ်းတဖက်တည်းတွင်ရှိသည်။ ဘီးလင်း၊ဖာပွန်ကားလမ်းနှင့်လည်း နီးသည်။ ချောင်းနှင့်ကားလမ်းအကြားရှိ “ကျေးတောရွာ “ […]
Posted May 19, 2016 EditorPosted in ကဗျာ
မျှစ် (စဝ်ခွန်ချို) တနွေ တဆောင်းလုံး အမိရင်ခွင်ထဲ ပုန်းလျိုး ကွယ်လျိုး ခိုလှုံ ပုန်းခဲ့…၊ အုံဂွမ် အသံတွေနဲ့ စိုထိုင်းလာတဲ့ မြေဆီတွေက အမိရင်ကိုခွဲ၍ စုံလုံးကန်းမိခဲ့ပေါ့….၊ ငါးစာသာမြင်ပြီး ငါးမျှားချိတ်မမြင်သူအဖို့ မိုးအကြိုမှာ အပျော်မကြူးခင်…..၊ မုဆိုးငါးသွယ်က အညွှန့်ချိုး အလိုမတူပါဘဲ ခြေတော်တင်ခံခဲ့ရတဲ့ ဘဝ….။ ။ စဝ်ခွန်ချို
လွပ်လပ်တဲ့ ချည်နှောင်ခြင်းတရား (ကိုသားကြီး)
Posted May 16, 2016 May 15, 2016 EditorPosted in ကဗျာ
လွပ်လပ်တဲ့ ချည်နှောင်ခြင်းတရား (ကိုသားကြီး) စိတ်နဲ့ ကိုယ်နဲ့ တစ်ထပ်ထဲ မကျတဲ့ ည အားနာတတ်ခြင်းဟာ အိပ်မက်ကိုဖဲ့ထုတ် ခိုးယူသွား ငါ မတားမိလိုက်ဘူး။ ဖြည့်ဖဲတစ်ချပ်ရဲ့တာဝန် မှာ ဘားဆိုင်ဟာ ဟာမိုနီကောင်းတယ်တဲ့လား တောရွာလေးမှာ သွားနေမယ် ပန်းပင်လေးတွေ ရေလောင်းမယ် နွေရာသီ ဝတ်စုံ အပါးလေးတစ်ထည် ချုပ်မယ် နံရံတွေ ဆေးလိုက်သုတ်မယ် ဂီတနုတ်တွေ ကြားက သူငယ်ချင်းကဗျာဆရာရဲ့ အအေးဆိုင်လေးကို ကာလပေါ်တေးလို နားထောင်မယ် နွေစပါးကွင်းပြင်ကို ပန်ချီးကားထဲ ထည့်လိုက်မယ် မြို့ကို ပြန် ရတဲ့ မွန်းကျပ်မှုမှာ နည်းပါးတဲ့စာနာစိတ်က အနီးကပ်ရန်သူဘဲ။ ကိုဘုန်းရေ… ခေတ်ဆူးရေ…. မနီတာလေးရေ….. အနီးဆုံး ကဗျာကို အရင်ဖတ်လိုက်ပါတယ်၊ ပုလင်းအလွတ်တွေ အသစ်ယောင်ဆောင်ဖို့ ပြင်ဆင်နေပုံ ဟာ ငါ့အတွက် မွန်းကျပ်လွန်းပါတယ်။ ဘုရားလမ်းက […]